နှစ်ပေါင်း ၆၇ ခုနှစ်အတွင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲများ တူညီနေကြောင်း။
၁၉၄၇ ခုနှစ် နဲ. ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရက်လနေ.များတူညီ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ များသောအားဖြင့် လူသားတိုင်း ပြောလေ့ပြောထရှိသည့် စကားတစ်ခွန်းမှာ အချိန်ကို နောက်ပြန်လည်လို့မရတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ဒီလ လို ရက်စွဲမျိုး တူညီမှုတွေ မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ လက်သုံးစကားကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် ရက်စွဲများက တော်လှန်လိုက်တာကို တွေ့ရပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၂၀၁၄ခုနှစ်ထဲက ရက်လများက ပြီးခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၆၇)နှစ်က ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲများအတိုင်း ထပ်တူထပ်မျှ ကျစေတာတွေကြောင့်ပါ။
ကမ္ဘာလောကကြီးထဲ ထူးခြားမှုတွေဟာ အံ့သြတုန်လှုပ်စရာအဖြစ် အမြဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် အခုလည်း မထင်ထားတဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တစ်ခုစီက ရက်စွဲကို ပြန်လည်၍ တစ်ထပ်တည်း ကျရောက်စေတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် များသောအားဖြင့် မည်သူမျှ မယုံကြည်နိုင်စရာ တခုဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်တို့ရဲ့ နေ့လရက်တွေ တွက်ချက်ပုံ သွားတူနေပေမဲ့လည်း မတူညီသည်က လပြည့်/လကွယ်ရက်များဖြစ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရလည်း သိရပါသည်။
"၁၉၄၇ ခုနှစ်က ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲ တူတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအရ ပြောရရင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ အဲ့လိုပဲ ၁၉၄၇ခုနှစ်က ဒီမိုကရေစီ အရေးနဲ့ ၂၀၁၄ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးရော တူညီနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာလေးကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ် "ဟု ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးမှ တာချီလိတ်အွန်လိုင်း သို့သုံးသပ်ပြောဆိုလာသည်။
"တကယ့်ကို အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လည်း မယုံနိုင်လို့ သေချာတိုက်ကြည့်တော့ လပြည့်လကွယ်က လွဲရင်နေ့ ရက် လ တွေကအစ သွားတူနေတာကို တွေ့ရတယ်"ဟု တာချီလိတ်မြို့မှ မြို့မိမြို့ဖ တစ်ဦးကလည်း တာချီလိတ်အွန်လိုင်းသို့ အံ့သြမှုဖြင့် ပြောကြားလာသည်။
လေ့လာတင်ပြသူ ။ ။ ကိုဇောင်း
Tachileik Online News.
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 31, 2013
ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ့နှင့် ရှေးဟောင်းဦးစီးတို့က မောင်တီးစေတီတော်ကိုသိမ်းထားသဖြင့် မောင်တီးဆရာတော်
က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်လိုပါသဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဒလမြို့နယ် ဒေါ်ရှမ်းထမင်းဆိုင်တွင် သတင်းယူလိုသူ သတင်းထောက်များကို ကားစီစဉ်ပေးပြီး လာရောက်ကြိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
မနက် ကိုးနာရီအရောက် ဒလမြို့ တစ်ဖက်ကမ်းထိပ် ဒေါ်ရှမ်း ထမင်းဆိုင်သို့ အရောက်လို့သိရပါတယ် ။
ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက ဖုန်း - 09 420315697
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, December 29, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 06, 2013
စစ်ကိုင်းမြို့၏ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ရာဇာမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်မြတ်စွာဘုရားပွဲတော်သို့ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အသီးသီးမှ ဆွမ်းတော်ကြီး အရုဏ်တော်အသင်းအဖွဲ့များက ၀တ်အသင်းများနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကားများ၊အလှပြယာဉ်များ စုံလင်စွာဖြင့် သွားရောက်၍ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ရေချမ်းများ ကပ်လှူပူဇော် ကြသည်မှာ စစ်ကိုင်းမြို့၏ အစဉ်အလာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသို့ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး နောက်တနေ့ အပြန်တွင် လမ်းတလျှောက်လုံးပျော်ပျော်ပါးပါးဖြင့် သီဆို၊ တီးမှုတ်၊ ကခုန်ကြရာ မြို့လူထုကလည်း စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါသည်။ ယခုနှစ်ပွဲတွင် ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက် လူငယ်များက ဇာတိမာန်တေးသီချင်းဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေရာ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်မောင်ချို မှ လာရောက်တားမြစ်ပြီး ယင်းသီချင်းကို ဆက်လက်ဆိုခွင့်မပြုဘဲ ချက်ချင်းရပ်ရန် ပိတ်ပင်၍ ဆက်ဆိုပါက ကားနှင့်အတူ တစ်ဖွဲ့ လုံးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ပန်းဘဲတန်းလူငယ်များ၊ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများနှင့် စေတနာရှင်၊ အလှူရှင် မြို့ခံလူထုများမှာ စိတ်အနှောက် အယှက် ဖြစ်ရကြောင်း သိရပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဘာသာရေးပွဲများတွင် အာဏာဖြင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ မဖြစ်သင့် ကြောင်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုများ အောက်ခြေကအစ ရှိနေသေးကြောင်း အများက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, October 22, 2013
စစ်ကိုင်းမြို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရှင်းလင်းဟောပြောပွဲနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားရယူပွဲ
၂၂၊၁၀၊၂၀၁၃ အင်္ဂါနေ့ ကစစ်ကိုင်းမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရှင်းလင်းဟောပြောပွဲနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားရယူပွဲ ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုးကျင်းပရာ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအသီးသီးရှိအလွှာပေါင်းစုံ မှလူထုအများ၊ တက်ရောက်ကြပြီး အမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ဦးကြည်ဝင်း(လပ္ပတ္တာ) ကနေပြီးရှင်း လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဟောပြော ပွဲနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားရယူပွဲသို့ စာရင်းရှိအင်အား(၁၀၁၇) ဦးတက်ရောက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်
ဆန္ဒပြု စနစ်ဖြင့်ဆန္ဒခံယူရာ၊ ပြင်ဆင်ရေးအတွက်(၁၀၁၃) ယောက် နှင့် အသစ်ရေးဆွဲရေးအတွက်(၄) ဦး ဆန္ဒပြုခဲ့ ကြပါသည်။'
မော်စကိုမှာ သာ တဲ့ လ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, October 20, 2013
မိုးစက်ဝိုင် အစား မည်သူကိုမှ ရွေးချယ်မှုထပ်လုပ်မည်မဟုတ်ဟု ပွဲစီစဉ်သူပြော
မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ အဖြစ် တရားဝင်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာ တရုတ်
လူမျိုးများဖြစ်နေတာကြောင့်ဟုဆိုကာ တခြားမြန်မာအမျိုးသမီးအလှမယ်တစ်ဦးကို အစားထိုး
သွားရောက်စေဖို့ လူတစ်စုမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ ဒီနေ့ (အောက်တိုဘာ
လ ၉ ရက်) အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများမှာ ပျံ့နှံနေပေမယ့် ပွဲစီစဉ်သူဘက်မှ လူရွေးချယ်ပွဲကို ထပ်
လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာတိုင်းမ်ကို ပြောပါတယ်။
"အစ်မတို့က မိုးစက်ဝိုင်ကို Miss Universe Organization ရဲ့အကြီးအကဲရှေ့နဲ့ ပရိသတ်တွေ
ပေးတဲ့ မဲအရေအတွက်၊ ဒိုင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေပေါ်မှာ အားလုံးပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးရွေး
ချယ်ထားတဲ့ အလှမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ရွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ လူသိရှင်ကြား၊ ငွေကုန်ကြေး
ကျခံပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်"လို့ မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပွဲကြီးကို စီစဉ်သူ တစ်ဦး
ဖြစ်တဲ့ Hello Madam မီဒီယာမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ မသိန်းယုဝေက ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူက "ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ ဘာမှပြော
စရာမရှိပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့က လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အဲသလိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ အစ်မတို့ဘက်က တောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးလေ။ အစ်မတို့ ပြိုင်ပွဲအတွက်
ဆက်လုပ် စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ"လို့ပြောပါတယ်။ မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမှာ
တရုတ်စပ်ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာ ရှမ်းတရုတ်ဖြစ်ကာ မိုးစက်ဝိုင်ရော သူ့အမေပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
မွေးဖွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများသာဖြစ်တယ်လို့လည်း မသိန်းယုဝေက ပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ကို
မြန်မာတိုင်းမ်က ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဖုန်း လက်ခံဖြေဆိုမှုကို မရရှိခဲ့ပါဘူး။ မယ်စကြာဝဠာ
မြန်မာပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကို အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့က အမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာ
ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိုးစက်ဝိုင်မှာ ကမ္ဘာ့မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, October 11, 2013
သံတွဲတွင် အကြမ်းဖက်မည့် သတင်းကြောင့် ဈေးဆိုင်များနှင့် ကျောင်းများ ပိတ်ထား
မီးရှို့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့တွင် အကြမ်းဖက်မည် ဆိုသည့် ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ဈေးများရှိ ဈေးဆိုင်များနှင့် စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ခဲ့ကြကြောင်း သံတွဲခရိုင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
သံတွဲမြို့ရှိ အံတော်ရပ်ကွက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ယင်းနေရာက ထွက်ပေးရန်၊ ယင်းနေရာကို အကြမ်းဖက်မည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့် ရွှေချောင်းပြင် ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို အကြမ်းဖက်မည်ဆိုသည့် သတင်းများကြောင့် ယင်းသို့ ဈေးဆိုင်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ထားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမှန် ဖော်ထုတ်ရေး အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သူ ၎င်းကဆိုသည်။
“ဈေးမှာ ငါးတွေတောင် မတက်တော့ဘူး။ ခြောက်ကပ်နေတယ်” ဟု ဦးဝင်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
သံတွဲတွင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် လုံခြုံရေး အင်အားကို တိုးမြှင့်ထားကြောင်း သံတွဲမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရှင်းပြသည်။
သံတွဲမြို့တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့အလံကို ငပလီ အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးပိုင်ရှင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုး ဦးကျော်ဇံလှက ဖျက်ဆီးသည်ဆိုကာ လူစုလူဝေးဖြင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဦးကျော်ဇံလှကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဦးကျော်ဇံလှကို အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်လိုက်သဖြင့် ဒေသခံများ မကျေနပ်ဖြစ်ကာ ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခဲနှင့်ပေါက်မှု၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ နေထိုင်သည့် နေအိမ်ကို ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်ပြီးနောက် မီးရှို့မှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အိမ်နှစ်လုံး မီးရှို့ခံခဲ့ရကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ဒေသခံများကို မေးမြန်းချက်များအရ သိရှိရသည်။
မီးရှို့မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူများကို အရေးယူရန် ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သံတွဲ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆိုသည်။
သံတွဲမြို့တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခတွင် ဦးကျော်ဇံလှ နေအိမ်ကို ခဲနှင့် ပစ်ပေါက်မှုဖြင့် သံတွဲမြို့ခံ နှစ်ဦးကို ပုဒ်မ ၃၃၆/၄၂၇ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း၊ ကမန်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ၏ အလုပ်အမှုဆောင်လည်းဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇံလှကိုမှု ဆဲဆိုမှု၊ သာသနာကို အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၂၉၄/၅၀၆ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သံတွဲမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သံတွဲမြို့တွင် တောင်ကုတ်မြို့သူတစ်ဦး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က မုဒိမ်းကျင့် ခံရသည့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေအိမ်အချို့ မီးရှို့ခံခဲ့ရရာမှ ပဋိပက္ခအရှိန် မြင့်လာသဖြင့် ညမထွက်ရအမိန့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 27, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 26, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 25, 2013
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံနှင့် ပတ်သက်ပြီး Mr.Jelson Garcia ပြောကြားခဲ့သော အသံဖိုင်
BIC (Bank Information Center) ၏ Asia Programမန်နေဂျာ Mr.Jelson Garcia က မြန်မာနိုင်ငံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံ ရှိသော ငွေစာရင်းငါးခု ပြည်ပတွင် ရှိနေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ရန် ရှိပါသည်။ ထိုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ The Daily Eleven အပါအ၀င် မီဒီယာ အသီးသီးမှ မေးခွန်း တစ်ခု (သို့မဟုတ်) နှစ်ခု မေးမြန်းခွင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ သိရှိလိုသည်များကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ မေးမြန်းလိုသူများ အနေဖြင့် ယခု ပို့စ်၏ အောက်ခြေရှိ Comment Box ၌ ဖြစ်စေ၊ သီးခြား Private Message ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။ မေးမြန်းလာသည့် မေးမြန်းချက်များကို အခြေခံပြီး The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဝေဖြိုး ကိုယ်တိုင် မေးခွန်း မေးမြန်း ပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်။ မေးခွန်းမေးမြန်းလိုသူများ အနေဖြင့် အခြား မီဒီယာများထံသို့လည်း မေးခွန်းများ ပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ထို့အတူ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံနှင့် ပတ်သက်ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က Mr.Jelson Garcia ၏ ပြောကြားမှုနှင့် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့သူ၏ အသံဖိုင်ကိုလည်း အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သတင်း Eleven Media Group
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 19, 2013
ဘာသာရေးပဋိအက္ခများ ရပ်တန့်သွားစေရန်အတွက် မိမိတစ်ဦးတည်းမတက်နိုင်ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ပြောကြား
တိုင်းပြည်၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် ဟန်ချက်ပျက်စေခဲ့သော နိုင်ငံအတွင်း မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခများကို ၎င်းတစ်ဦးတည်း၏ အင်အားဖြင့် ရပ်တန့်ရန် မတက်နိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ပိုလန်နိုင်ငံ ဝါဆောင်မြို့တွင် ပိုလန်သမ္မတဟောင်းနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်နေသော ပဋိပက္ခများကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အနေဖြင့် ရပ်တန့်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိမရှိ ဆိုသည့် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ကျွန်မတို့လိုအပ်တယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေဟာ လုံခြုံမှုကို ခံစားနိုင်မယ်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို ရရှိထားတဲ့ပြည်သူတွေသာလျှင် မတူညီတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားက အပြန်အ လှန် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေကို ပြန်လည်စတင်တည်ဆောက်နိုင်မယ်။ ဒီအချက်က ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဆိုတာ အခိုင်အမာပြောလိုပါတယ်” ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စတင်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများမှာ ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နေရာအနှံ့တွင်လည်း ဆူပှုမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကောလဟာလများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အမုန်းတရား အခြေခံပြောဆိုမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေကာ နိုင်ငံတွင်း အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် လူပေါင်း နှစ်ရာကျော် သေဆုံး ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစု၏ လေးစားမှုကိုရရှိထားပြီး လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အတွက်ပေးအပ်သော နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလည်း ရရှိထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း အပေါ် သတင်းထောက်အများစုက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း (CAN) သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီး ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပက်တက္ကသိုလ်တွင် “တော်လှန်ရေးမှသည် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးသို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြော သွားမည်ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, September 16, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 14, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 13, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, September 08, 2013
ရွှေဝါရောင်မျိုးဆက် သံဃာတစ်ပါး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ကျောင်းတိုက်မှ ထုတ်ပယ်ခံရ
သာသနာ ပိုင်မြေရောင်းစားမှုဖြင့် ကျောင်း ထိုင်ဆရာတော်ကို တရားစွဲခဲ့ သော သံဃာတော်တစ်ပါးအား နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့မှ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများပြု လုပ်သည်ဟု ဆိုကာ ကျောင်းတိုက် အတွင်းမှထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပယ်ခံရသော သံဃာတော် ၏မိန့်ကြားချက်အရသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ငါး/မြောက်ရပ် ကွက် လိပ်ပြာ ကန်ကျောင်း တိုက် အ လယ်ကျောင်းကြီးနေ ဦးဃောသိ တမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျောင်း ထိုင်ဆရာတော်မှ ကျောင်းတိုက် အတွင်းမှ သာသနာ ပိုင်မြေပေ (၃၀*၇၀)အား ရောင်းချမှုပြုသည် ကို သံဃာတော်အပါး ၃၁ပါးခန့် လက်မှတ်ဖြင့်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ စာကိုနိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယ ကအဖွဲ့သို့စာတင်ခဲ့သော်လည်း ဦးဇင်းဃောသိတအား ကျောင်း တိုက်အတွင်းမှ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှား ပေးပါရန် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာယကသို့ လျှောက်ထားလိုက် သည့်အတွက် ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ် ခြင်းခံလိုက်ရကြောင်း ရွှေဝါရောင် သံဃာအရေးအခင်းတွင် လှုပ်ရှား ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဃောသိတ ကမိန့်သည်။
ဦးဃောသိတက ''ဦးဇင်း က သာသနာမြေရောင်းစားတာ မကျေနပ်လို့လျှောက်ထားခဲ့ပေ မယ့် ဦးဇင်းကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံ တော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကို ဆရာတော်ဦးဇောတိကကလျှောက် ထားတယ်။ အခုလဲနိုင်ငံတော်သံ ဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး သံဃမဟာနာယ ကအဖွဲ့ကိုကျောင်းတိုက်က ဖယ် ရှားဖို့အမိန့်ပေးလို့ ဦးဇင်းကျောင်း ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်''ဟု မိန့်သည်။ ဦးဃောသိတသည် လိပ်ပြာ ကန်ကျောင်းတိုက်အလယ်ကျောင်း ကြီး၏ စာချကိုယ်တော်တစ်ပါး ဖြစ်ပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ရက် (၂၀ -၁၀-၂၀၁၃ ရက်) ညနေ ၄နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ ထွက်ခွာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နယကအဖွဲ့ ၄ရ ပါးစုံညီဒုတိယ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အညီဩဝါဒခံယူကာ ဝန်ခံကတိ ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဦးဃောသိတက ''ဦးဇင်းကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးတုန်းက လုံးဝကိုေ မြယာကိစ္စကိုမဖော်ပါဘူး၊ေ မြ ယာကိစ္စကိုမပြောဘဲနဲ့ ဦးဇင်းကို သာလျှင် ဒီကျောင်းထဲမှာ နိုင်ငံရေး တွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး ပုဒ်မ ကြီးတွေ တပ်ပြီးထုတ်ပယ်တာပါ။ ဦးဇင်းက မြေယာကိစ်စတုန်းကလဲ ခေါင်းဆောင်ပြီး ကန့်ကွက်လို့ ဦးဇင်းကိုပဲထုတ်ပယ်တာဖြစ်မယ်'' ဟု မိန့်သည်။
ဆက်လက်ပြီး ''ကျောင်းတိုက် ကို မော်ရွှပြေည်ရှမ်းကျောင်းဆရာ တော်ကို ရောင်းစားခဲ့တယ်။ ဦး ဇင်းတို့ရှမှေ့ာတင် ကျောင်းတိုက် နှစ်ကျောင်းကို ရောင်းစားခဲ့တာ မြင်ခဲ့ရတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို နိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုချက်ရမှ သာ လျှင် အဲ့ဒီကျောင်းကကျန်တဲ့ တစ် ပါးကို လက်ဆင့်ကမ်းခွင့်ရတယ်။ အခုဟာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ သူတို့ ဘာသာရောင်းစားသွားတာဖြစ် တယ်''ဟု ဦးဃောသိတကမိန့် သည်။
ဦးဃောသိတသည်ရွှေဝါ ရောင်သံဃာအရေးအခင်းတွင် လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ခု နှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာထောင် ခုနစ်နှစ်ကျခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ''ဦးဇင်းအနေ နဲ့နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ဆရာ တော်ကြီးများအနေနဲ့ အမှားကို အမှန်တရားဖြစ်အောင် ဖော်ဆောင် ပေးဖို့လိုသလို သာသနာရေးဝန် ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကလဲ ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အမှန် တရားကိုဖော် ဆောင်ဖို့လို ပါတယ်'' ဟုမိန့်သည်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 07, 2013
ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ကိစ္စနှင့် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိချိန်တွင် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် မီဒီယာများသို့ သတင်းအချက်အလက် များကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပြန် တော့မည်မဟုတ် ဟု အတည်ပြုဆုံးဖြတ် လိုက်ကြောင်း စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ တာဝန်မှူး ဦးမြင့်ဦးက စက်တင်ဘာ ၄ ရက် နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များ စိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံး နေရာဖြစ်သော ရွှေတိဂုံစေတီရှိ သတင်းအချက်အလက် များကို သတင်းမီဒီယာများကို တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြီး တိုက်ရိုက်သတင်း ထုတ်ပြန်တော့မည် မဟုတ်သည့်အပြင် သတင်းများကို တိုက်ရိုက်ဖြေကြားမှုများပါ ပြုလုပ်တော့ မည်မဟုတ် ဘဲ သတင်းအချက်အလက် များကို စေတီတော် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သာ ဖော်ပြပေးသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
သတင်းအချက်အလက်များအား သတင်းမီဒီယာများသို့ ဆက်လက်လက်ခံ ဖြေကြားပေးသွားမည်ဟု စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က The Voice ၏ မေးမြန်းချက်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းကြိုင်က ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့ပြီး နောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
"မေးမြန်းချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ မေးခွန်းတွေကို စာတင်ပြီးတော့ မေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ရွှေတိဂုံ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်။ အရင်လိုတော့ လက်ခံမဖြေကြားတော့ ဘူး။ ဂေါပကအဖွဲ့ လူကြီးတွေက အလုပ်များတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာပါ" ဟု ယင်းစေတီ၏ လုပ်ငန်းဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်သင်းသင်းအေးက ပြောကြားသည်။
အမေ အားလပ်ရက် ကို နားနားနေနေ စိတ်အပန်းဖြေစေဘို့ အတွက် အဝေးရောက် သား တယောက် ရဲ့ ရင်ထဲက လာတဲ့ စကား....
ဒီတပတ်ထုတ် ဒီလှိုင်းဂျာနယ်မှာ အံတီကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ အားလပ်ရက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ဘ၀ပေးအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အံတီအပါးမှာ မနေနိုင်တော့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ကျဉ်ကနဲခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အံတီရင်ထဲကိုလဲ ၀င်ရောက်ခံစားနားလည်လိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော့အတွက် ဒါဟာ ၂၅နှစ်တာကြာပြီး ပထမဆုံးပြန်ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားတခွန်း သို့မဟုတ် မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်းကွင်းတခုဖြစ်နေပါတယ်။ အသစ်မဟုတ်ပေမယ့် တကယ့်ကိုအဆန်းတခုပါ။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးထဲ စိတ်ဒုံးဒုံးချပြီး ရှိသမျှ ကာယအား ဥာဏအား အကုန်လုံးကို အိတ်သွန်ဖာမှောက် သွန်ချပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအတွက် ထမ်းရွက်နေခဲ့တဲ့ အံတီ..
မိသားစုအရေး စီးပွားရေး အမျိုးဆွေသဟာအရေး ဘာအရေးကိုမျှ ၀တ်ကျေတန်းကျေတောင်ဂရုမထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အံတီ..
နေအိမ်ပြင်ပ အကျယ်ချုပ်မှာလဲ အသက်အန္တရယ် ရန်ပြုခံရမှုတွေကို သတိ သတ္တိ ပညာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရင်း၊ နေအိမ်တွင်း အကျဉ်းချုပ်မှာလဲ အထီးကျန်ဆန်မှု သိက္ခာချဖန်တီးလုပ်ကြံခံရမှုတွေကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်ရင်း တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် မမှိတ်မသုန် ယနေ့တိုင် လုံ့လမလျှော့သေးတဲ့ အံတီ….
ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်..။ တကယ်ကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေပါပြီ..။
လူထုက လိုလားတောင့်တနေတဲ့ စနစ်တခုကို လူထုလက်ထဲရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ကြတဲ့အခါ ပေးဆပ်မှုတွေအများကြီး ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူရဲကောင်းတွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အထင်ကရတွေကော အညတရတွေကော ဒုနဲ့ဒေးပါ။ တာဝန်သိသူအနေကနေ တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်အောင် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ကြံဆခဲ့ကြတာ ဆယ်စုနှစ်များကြာခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် အံတီလို တာဝန်ယူရဲသူအဖြစ် သတ္တိရှိရှိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဘို့အတွက်ကတော့ တော်တော်ကိုနည်းနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လဲ တာဝန်မယူရဲသူတွေက ကိုယ့်ဂုဏ်ပုဒ်လေးတွေ ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ဝေဘန်တိုက်ခိုက်တာတွေခံနေရတာမို့ ….ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ တကယ်ကို နွမ်းနယ်နေမှာပါ..။
တကယ်ကို ဘာအပူအပင်မှမတွေးရ မကြားရ မမြင်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာ တရက် သို့မဟုတ် ၂ရက် ဒါမှမဟုတ် ရသလောက်အချိန်လေးတခု လိုချင်နေမှာ အမှန်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄နှစ်ကျော်ကာလ ၁၉၈၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ အံတီရဲ့ ၄၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာပါ..။ အဲဒီနေ့ဟာ ယနေ့အချိန်အထိ အံတီရဲ့ နောက်ဆုံးအားလပ်ရက်ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီကာလမှာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေး၊ တိုက်ပွဲဝင်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းပြန်တက်ရေး မတက်ရေး သဘောထားတွေနဲ့အတူ စစ်အစိုးရနဲ့ အတင်းမာဆုံး တိုက်ပွဲရှိန်အမြင့်မားဆုံးအချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်။ အံတီအနေနဲ့ " မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ "ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အတူ မြို့နယ်တော်တော်များများကို စည်းရုံးလှည့်လည်ဟောပြောရနေချိန်၊ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လူငယ်) ပထမအကြိမ် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပဘို့ ပြင်ဆင်နေကြချိန် နေ့မအား ညမအား အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့အချိန်ပါ။
အဲဒါကြောင့် အံတီအနေနဲ့ အဲဒီမွေးနေ့ကျရင် အိမ်မှာအေးအေးလူလူ နားဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အံတီရဲ့နားရက်က အများတကာလို စနေ တနင်္ဂနွေမဟုတ်ဘဲ တနင်္လာနေ့ဖြစ်နေပါတယ်။ မွေးနေ့မနက်က ကျွန်တော်တို့အစောကြီးနိုးနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် ကျွန်တော်တို့ သုံးရောင်ခြယ်က ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျော်သူရ၊ ဘန်နီ၊ ကိုမျိုးသိန်း၊ ထင်ကျော်၊ နေလွင်၊ အောင်လေး တို့နဲ့အတူ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်၊ မသိင်္ဂီ၊ ကိုစိန်အုန်း၊ ဦးနီ၊ ကိုပေါ်လွင်၊ ကိုအောင်ကျော်မိုးတို့လောက်ဘဲ အိမ်မှာရှိကြပါတယ်။ မြို့နယ်တော်တော်များများက မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေ ဆုတောင်းတွေနဲ့အတူ ကိတ်မုန့်တွေ လာပို့ကြပါတယ်။ အမှတ်အရဆုံး လက်ဆောင်ကတော့ အခုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်က ဦးသိန်းဟန်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အလံ ကိတ်မုန့်က ကျွန်တော်တို့အတွက် တာအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အံတီရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာ စုထိုင်ကြပြီး ဗူဘောင်းလေးတွေကို လေမှုတ်ကြပါတယ်။ ဗူဘောင်းတွေ လေတင်းပြီးပေါက်သွားတာ၊ ပေါက်မှာစိုးလို့ ရဲရဲလေမှုတ်မသွင်းရဲကြတာ၊ လေမှုတ်သွင်းရင်း လွတ်ထွက်သွားတာ ရီကြမောကြရင်း ဗူဘောင်းလေးတွေပေါ်မှာ ပုံလေးတွေဆွဲကြပါတယ်။ နောက်တော့ တဖက်ခြံမှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးက ကလေးတွေကို ဗူဘောင်းလေးတွေ သွားဝေကြပါတယ်။ လက်ဆောင်ရရှိတဲ့ မွေးနေ့မုန့်လေးတွေကို စားကြပြီး ကဒ်ထူစာရွက်လွတ်တခုမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အံတီအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေရယ် လက်မှတ်တွေရယ်ထိုးပြီး အမှတ်တရပေးအပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကိုစိန်အုန်းကတော့ စိတ်ကြိုက်ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပါတယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက် ကျွန်တော်တို့ တော်တော်ကုန်သွားပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့ဘ၀မှာ ကိုယ်ကနေ ပေးဘူးတဲ့ ပထမဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အံတီနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးတွေအပါအ၀င် ရီစရာ မောစရာ စကားတွေပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗဟုသုတရမယ့် ဗွီဒီယိုအခွေလေးတွေလဲ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါတော့သိပ်မမှတ်မိဘူး။ ဒါပေမယ့် အံတီအတွက် တကယ့်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စိတ်အပန်းပြေသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်တော့ အံတီက အပေါ်ထပ်တက်သွားပြီး တယောက်တည်း စာဖတ်အနားယူပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုးအားလပ်ရက်ဟာ နောင် ၂၄နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာ အဲဒီတုန်းက ဘယ်သူမှထင်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီးလေးတွေရလာတော့ ချစ်လိုက်ရတာ။ သူများနိုင်ငံမှာ မျက်နှာငယ်ရမှာစိုးလို့ သူတို့တွေ အတွက် ပူလိုက်ရတာ၊ အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရတာ၊ အားလပ်ရက်တွေမှာ ဗဟုသုတရ အပန်းလဲပြေအောင် ကမ်းခြေပို့၊ ဟိုသွား ဒီသွားလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်လိုက်ရတာ။ ကိုယ်အလုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာ သူတို့မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ကျန်ခဲ့ကြပြီး ကိုယ်အလုပ်ကပြန်လာလို့ သူတို့လေးတွေ ပျော်ရွှင်ကြတာကိုကြည့်ပြီး သနားပြီး အချစ်ပိုရတာ….။
အံတီကော…..သူ့သားတွေနဲ့…အဲဒီလို မနေချင်ဘဲ…မချစ်ချင်ဘဲ…မသွားချင် မလာချင်ဘဲ….အခုလို ဝေးကွာနေချင်ပါ့မလား..? ဘာအတွက်ကြောင့်ကို ဘယ်လိုသတ္တိမျိုးနဲ့…အခုလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲ..? အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်..ပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုဘို့ဆိုရင် အနစ်နာခံ အပင်ပန်းခံပြီး အခွင့်အလမ်းကိုရအောင်ရှာတယ်။ ကိုယ့်ကိုအသက်အန္တရယ်ပြုခဲ့တာတွေကိုတောင် ယနေ့အချိန်အထိ ဥပက္ခောပြုထားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အံတီအနေနဲ့ အခုလိုအားလပ်ရက်မျိုးလေးတခါလောက် တောင့်တမိတာဟာ ကျွန်တော့အတွက် အသစ်မဟုတ်ပေမယ့် တကယ့်ကို ဆန်းလှပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးအတွက်အပူ ကိုယ်သာယူမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကြောင့်မို့လို့ပါ။ တာဝန်ယူရဲသူ တာဝန်ယူရသူ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားသူတယောက်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်မှာနှစ်ရှည်လများ ရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ ပြဿနာတွေ ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေက လွှတ်တော်ပိတ်လို့လဲ ရပ်ထားလို့မရ၊ စနေ တနင်္ဂနွေမို့လို့ မဖြစ်ရဘူးဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်လို့မရ နောက်ဆုံး အိပ်ရင်တောင် အိမ်မက်ထဲမှာ စဉ်းစားအဖြေရှာနေရတာမဟုတ်လား..? အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေနဲ့ကွာတဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်နေလို့ အမြဲတန်းဆန်းနေရတာပါ..။
ဒီအကြောင်းလေး စဉ်းစားနေရင်း အံတီ ၄၄နှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင် တလ၀န်းကျင်မှာ အတူတူရှိခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်ကလေးတခုကိုလဲ ပြန်လည် အောင့်မေ့မိပါတယ်။ ၁၉၈၉ခုနှစ် မေလမှာပါ။ အဲဒီတုန်းက ယနေ့အထိအံတီရဲ့ခရီးစဉ်တွေထဲမှာ အကြာမြင့်ဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကာလပါ။ ကျွန်တော့ဇာတိ မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေ မိုးကောင်းအထိ ရထားနဲ့ မိုးကောင်းကနေ ကသာမြို့အထိ ကားနဲ့ ရက်သတ္တပတ် ၁ပတ်ကျော် ခရီးဆက်လာခဲ့ပြီးနောက် ရေလမ်းကနေတဆင့် ဗန်းမော်မြို့ကို ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကစီးခဲ့ရတဲ့ကားတွေဆိုတာ များသောအားဖြင့် ဂျစ်ကားတွေပါ။ လမ်းတွေဆိုတာကလဲ နွေရာသီသုံးသာသာပါ။ အဲဒီတော့ ကားစီးရတယ်ဆိုတာ ငြိမ်ငြိမ်လေးဇိမ်နဲ့ထိုင်စီးလို့မရပါဘူး။ ကားအခုန်မှာ ဟန်ချက်မပျက်အောင် မြဲမြဲကိုင်ပြီး အလိုက်သင့်ထိန်းစီးရတာပါ။ ရက်ပေါင်းများစွာ အဲလိုခရီးသွားခဲ့ရလို့ ဗန်းမော်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါ အရမ်းကို ပင်ပန်းနေပါပြီ။ ဗန်းမော်မြို့ကိုမရောက်ခင်ညကတည်းက အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ အံတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာချတဲ့စာတွေကို စစ်ကားတွေအသုံးပြုပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတဲ့အချိန် ညဘက်မှာတမြို့လုံးကို ကျဲထားပါတယ်။ မြို့ထဲတလျှောက် အံတီသွားလေရာကိုလဲ အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ လူစုလူဝေးမလုပ်ဘို့ ခြိမ်းခြောက်နှောင့်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေကြားကနေ လုပ်စရာရှိတာတွေကိုလုပ်ပြီး မိုးချုပ်တော့ တည်းခိုအနားယူရမယ့်အိမ်ကို ရောက်လာပါတယ်။
တနေကုန် ပင်ပန်းထားလို့ လန်းဆန်းသွားအောင် ရေချိုးသန့်စင်ဘို့ အံတီကအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့လဲ လိုက်လာကြပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတွေက အိမ်အနောက်ဖက်မှာဖြစ်ပြီး လမ်းမှာ မီးချောင်းတွေ လင်းထိန်နေအောင်ထွန်းထားပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ လုံခြုံရေးယူပေးကြတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့တွေအားလုံးက အိမ်ရှေ့ခြံအပြင်တ၀ိုက်မှာရှိကြပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရေချိုးခန်းဘက်မှာတော့ ရှင်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လုံခြုံရေးတာဝန်ခံလူငယ်တယောက်သာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အံတီက မြစ်ဆိပ်မှာချိုးချင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ မြို့ခံတွေသိရင် အလုပ်ပိုမှာစိုးလို့ အသိမပေးချင်ကြောင်းပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ အနီးမှာရှိနေတဲ့လူငယ်ကို မေးကြည့်တော့မြစ်ဆိပ်က မဝေးကြောင်းပြောလို့ သူ့ကိုဦးဆောင်ခိုင်းပြီး အိမ်နောက်ပေါက်ကနေ မြစ်ဆိပ်ကိုရောက်ပြီး ရေဆင်းစိမ်ကြပါတယ်။ မြစ်ဆိပ်အဆင်းမှာ ကုန်းမြင့်လေးဖြစ်နေလို့ အံတီနဲ့မသိဂိံကို တွဲကူဆင်းပေးရပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားကနေတလျှောက်လုံး ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာတဲ့ ထောက်လှန်းရေးတွေလဲ မသိလိုက်ပါဘူး။
ညမိုးချုပ်ချိန် ဧရာဝတီမြစ်ရေအေးအေးလေးစိမ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အံတီတော်တော်လေးလန်းဆန်းပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားပုံရပါတယ်။ အသံမကျယ်အောင် ထိန်းပြီးပြောကြရင်း မီးရောင်ထိန်ထိန်နဲ့ မြစ်လယ်ကနေ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ခရီးသည်တင်သင်္ဘောကြီးကို ကြည့်ပြီးပျော်ကြပါတယ်။ ပါလာတဲ့လူငယ်လေးကလဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ရေလိုက်စိမ်ရင်း အဲဒီသင်္ဘောနဲ့တဖက်ကမ်းက ရွာတချို့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်ဘဲ ကြာမယ်ထင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တချို့ လိုက်လာကြလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်တက်လာကြပါတယ်။ သူတို့သတိထားမိချိန်မှာ အံတီအပါအ၀င်ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့တဲ့အပြင် တာဝန်ကျလူငယ်ပါပျောက်နေလို့ အရမ်းစိတ်ပူပြီး ရှာကြတာပါ။ အဲဒီလူငယ်ပါမတွေ့တော့ မြစ်ဆိပ်ဆင်းမယ်လို့တွက်ပြီး လိုက်လာကြတာပါ။ အဲဒီလူငယ်ကို အပြစ်တင်စကားပြောကြလို့ ကျွန်တော်တို့အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
၂၅နှစ်တာကာလတခုလုံး တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေရင်း လွတ်လပ်စွာအနားယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အံတီကို တကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေကြတဲ့ သားတွေ သမီးတွေက စာနာလေးစားချစ်ခင်နေကြမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သမုဒ္ဒရာနှစ်ခု ၀န်းရံထားတဲ့ ကျွန်တော်လက်ရှိနေနေတဲ့ နယူးဇီလန်က ပေါများလှတဲ့ကမ်းခြေတခုကို ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းခေါ်သွား၊ ပြီးတော့ ယာယီတဲလေးထိုး၊ အံတီစားချင်တာလေးတွေ ကျွန်တော်တို့မိသားစုက ချက်ပြုတ်ကျွေးချင်ပါတယ်။ အံတီက စာအုပ်ဖတ်လိုက် လမ်းလျှောက်လိုက် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ငေးကြည့်ပြီး တွေးချင်တာတွေး ဗိုက်စာလာရင် ပူပူနွေးနွေးစားလိုက်..။ အဲဒီလိုမှ ပျင်းလာရင် ရီစရာလေးတွေပြော နောက်ပြီး… အံတီကိုယ်တိုင် ဘွဲ့တံဆိပ်တော် အပ်နှင်းထားဘူးသော အထာမကျတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ဦးရွှေရိုးအကနဲ့လဲ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်ပါတယ်..။
တချိန်ချိန်ပြန်ဆုံနိုင်ဘို့ အခွင့်အရေးကို တောင့်တလျက်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 04, 2013
အခြေခံပညာအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရိုးများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဗြိတိသျှကောင်စီတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင်စတင်သင်ကြား ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ဗြိတိသျှ ကောင်စီမှ ၂-၉-၂၀၁၃ ရက်က သိရသည်။ “ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဗြိတိသျှ ကောင်စီတို့ပူးပေါင်းပြီး သင်ရိုးအဆင့်မြှင့်တင် ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သင်ခန်းစာ ထပ်ဖြည့်တာတွေ ဖြည့်မယ်၊ ဖြုတ်သင့်တာတွေ ဖြုတ်မယ်။ သင်ရိုးက ပြောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်မြှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ရိုးတွေ ပိုကောင်းလာမှာပါ။ အပြောစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့ သင်ခန်းစာတွေ ထပ်ထည့်ပေးသွားမှာပါ” ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။ “ ဗြိတိသျှကောင်စီအနေနဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံခြားက ပညာရှင်တွေ၊ Unicef က ပညာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပရောဂျက်တွေ ပြုလုပ်ပြီး အခြေခံပညာအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး မြင့်မားစေဖို့ ဦးတည် ရေးဆွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ဒေါက်တာ ခိုင်ဖြူထွဋ်က ပြောသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သင်ကြားမှု အပိုင်း၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အနေအထားပေါ်မူတည်၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအပြင် အကြံပြုချက်များပါ တစ်ပါတည်း ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတင်ဘဲ သွားလာခွင့် ပြုရမည့်ဒေသ နိုင်ငံဧရိယာ၏ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ခန့် ကျန်ရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတင်ဘဲ သွားရောက် လေ့လာခွင့်ရှိသည့် ဒေသများသည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကျော်အထိ ရှိလာပြီး ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတင်ဘဲ သွားလာခွင့်ပြုရမည့် ဒေသသည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ခန့် ကျန်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ နိုင်ငံတွင်း လည်ပတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်က ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မလိုအပ်ဘဲ သွားလာရန် ခွင့်ပြုသည့် မြို့နယ်များ၊ မြို့ပေါ်သာ သွားလာခွင့်ပြုသည့် မြို့နယ်များ၊ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရသည့်မြို့နယ်များ၊ ခရီးသွားများ လုံးဝသွားရောက်ခွင့် မရှိသည့် ကန့်သတ်ဒေသများဟု ရှိခဲ့သည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ယခင်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် သတ်မှတ်နယ်မြေ ဒေသများ၌ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် နယ်မြေအနေအထားတို့ပေါ် မူတည်၍ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် ပြည်တွင်းသွားလာမှုနှင့် ပတ်သက်သော နယ်မြေဒေသ သတ်မှတ်ချက်များအား ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ယခုနှစ်အတွင်း အသစ်ပြန်လည် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
''ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ထားတဲ့ စာပါ မြို့နယ်တွေကို ရေတွက်ကြည့်ပြီး တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး (စာပါမြို့နယ်) အတိုင်းအတာအရ သွားလာခွင့်ပြု နယ်မြေ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြို့ပေါ်ခွင့်ပြု၊ မြို့ပြင်ခွင့်ပြု ချက် တောင်းခံရမယ့် နယ်မြေ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံဖို့ လိုအပ်တဲ့နယ်မြေ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုပြီးတော့ တွက်လို့ရပါတယ်။ ခြုံပြောရရင်တော့ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကျော်လောက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တင်စရာ မလိုဘဲ သွားနိုင်တယ်လို့ တွက်ဆလို့ရပါ တယ်'' ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များနှင့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ လည်ပတ်သွားလာ နိုင်သည့် ခရီးစဉ်ဒေသများတွင် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သွားလာခွင့်ရသည့် ဒေသများသည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်တို့တွင် တည်ရှိနေသည်။
ပဲခူး၊ မကွေးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်တို့သည် ရာနှုန်းပြည့် သွားလာခွင့် ပြုထားသော ဒေသများ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ကျန်ဒေသများ၌ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မလိုအပ်ဘဲ သွားလာခွင့် ပြုထားသော မြို့နယ်များ အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ၂၂ ရာခိုင် နှုန်း၊ ကယားပြည်နယ်တွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ရှိနေသည်။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရသည့် ဒေသများအနက် နေပြည်တော်သည် ဒေသအားလုံးသို့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရာနှုန်းပြည့် တောင်းခံရန် လိုအပ်သော ဒေသဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့နယ် ၃၃၀ အနက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မလိုအပ်ဘဲ သွားလာခွင့် ပြုထားသည့် မြို့နယ် ၂၃၇ မြို့နယ်ဖြင့် ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြို့ပေါ်သာ သွားခွင့်ပြုထားသည့် မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်ဖြင့် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည့် မြို့နယ် ၄၁ မြို့နယ်ဖြင့် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ထားဝယ်မြို့နယ် ၊ ၀ဲကျွန်းထိန်သစ်ရပ်ကွက် ၊ကမြောကင်းလမ်း ၊ ကမြောကင်းတံတားနံဘေး ၌လက်ရှိလယ် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသောလယ်သမား ဦးစံလင်း အား ထားဝယ်ခရိုင်အုက်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဆွေ မှ ၁၈၇၆ ခုနှစ် မြေယာနှင့် အခွန်တော်ဥပဒေ ပုဒ်မ (ဏ ) ဖြင့်တရားစွဲဆိုကာ၂၆.၈.၂၀၁၃ (တနင်္လာနေ့)တွင်ဒဏ်ငွေ (၂၀၀) နှင့်ထောင်ဒဏ်(၁)လကိုထားဝယ်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးထွန်းလင်းမှချမှတ်ခဲ့သည်။
ဦးစံလင်းသည်ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းတရားမျှတမှုမရှိသည့်လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးထောင်ကျခံရသောလယ်သမားပေါ့လို့သမီးဖြစ်သူမရွှေစင်ယုမှပြောကြားသည်။ထားဝယ်အများ ပိုင်ကုမ္ပဏီ ကလယ်မြေကိုသိမ်းတယ်မူလပိုင်ရှင်ဆိုတာရှိပေမယ့်ကျွန်မအဖေကိုသူကိုယ်တိုင် လယ်မ လုပ်နိုင် လို့ လယ်လုပ် ပိုင်ခွင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့(၄)နှစ်ခန့်လောက်ကတည်းကလွှဲပြောင်းပေးထားပြီးကျွန်မတို့ တစ်မိသားစုလုံးဒီ လယ်ကို စိုက်လာခဲ့တာပတ်ဝန်းကျင်ကလယ်သမားတွေအကုန်လုံးလည်းအသိဘဲကျွန်မတို့ကဘာလျှော်ကြေးမှ မယူ ထားတော့ထွက်ပေးစရာ လည်းမလိုဘူးသူတို့ပေးတဲ့လျှော်ကြေးဆိုတာကျွန်မတို့ဘ၀အတွက်ဘာအာမခံ ချက် မှမရှိဘဲ ၊ လယ်သမား လယ် ပျောက်ရင် ထမင်းငတ်မှာပေါ့၊အခုတော့ကုမ္ပဏီကလယ်ကိုမတရားသိမ်းချင်တယ် ကျွန်မတို့ကအသိမ်းမခံဘူး ကုမ္ပဏီကိုပေးချင်တော့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားစွဲတယ်ကျွန်မအဖေထောင်ကျ တယ် ကောင်းပါတယ် ကျွန်မအဖေ က ထားဝယ်မြို့ရဲ့ စံပြလယ်သမား ဖြစ်သွားတာပေါ့ ဟုမရွှေစင်ယု မှဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးစံလင်းအားထောင်ချခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထားဝယ်လယ်သမားများမှလည်းသဘော မတူကန့် ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးလယ်သမားများ၏ဂုတ်သွေးစုတ်အမြတ်ထုတ်တဲ့ ထားဝယ်အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အားထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိလယ်သမားများအနေဖြင့်ထားဝယ်လယ်သမားများသမိုင်း၏ကုမ္ပဏီဆိုးအဖြင့်သတ်မှတ်ကာထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိလယ်သမားမိသားစုဝင်တိုင်း၏သမိုင်းတာဝန်တစ်ရပ်ပမာစဉ်ဆက်မပြတ်သပိတ် မှောက်သွားနိုင်သည်အထိစည်းရုံးသွားမည်၏ ဟု ထားဝယ် လယ်သမားများ အစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ သည်။
ကိုထွန်းထွန်းဝင်း (ထားဝယ်တောင်သူလယ်သမား ကွန်ယက်)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, September 01, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, August 31, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, August 28, 2013
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, August 26, 2013
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကလေးပျောက်ဆုံးမှုများ ပြန်ဖြစ်နေ၍ မိဘများ အထူးသတိထားရန်လို
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရှိ အချို့မြို့နယ် များတွင် ကလေးပျောက်ဆုံးမှုများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနေကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော သုံးလေးရက် အတွင်းက မြောက်ဥက္ကလာကြိုး တံတားအနီးနှင့် လှိုင်သာယာ၊ ရွှေ ပြည်သာမြို့နယ်တို့၌ ဆယ်ကျော် သက်အရွယ်ကလေး လေးဦးပျောက် ဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ မိဘဆွေမျိုးများအ နေဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း များသို့မတိုင်ကြားဘဲ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းက ''ကျွန်တော်တို့ အဲ ဒီသတင်းကို စုံစမ်းပြီးသွားပြီ။ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်က ရဲ ကိုမတိုင်ကြသေးဘူး။ ရှာနေကြ တုန်း။ အသက်ကိုးနှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနဲ့ မိန်းက လေးတစ်ဦး၊ ရှစ်နှစ်အရွယ် မိန်း ကလေးတစ်ဦးပါ။ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ကစားနေရင်းပျောက်သွား တာလို့သိရတယ်။ နောက် လှိုင်သာ ယာက ယောက်ျားလေးတစ်ဦးက တော့ အသက် ၁၂နှစ်ပါ။ အပြင် သွားရင်းနဲ့ အိမ်ပြန်မရောက်လာ တော့ဘူး။ သူတို့ကို ရဲစခန်းမှာ လာအမှုဖွင့်ဖို့ ပြောထားတယ်''ဟုပြောသည်။
ကလေးပျောက်မှုများသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်က လွန် စွာအဖြစ်များခဲ့ပြီး ယခုတစ်ဖန် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူက ''ကျွန်တော်တို့အစိုးရအ ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ မကြားမိပါ ဘူး။ ကောလာဟလတစ်ခုလဲ ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ပျောက်ရင် လဲ သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ပါလို့ပြော ချင်ပါတယ်။ ပြန်တွေ့မှာပါ''ဟု ပြောသည်။
ကလေးငယ်များကို ဖမ်းဆီး ကာ အတွင်းကလီစာများကိုထုတ် ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောင်းစား သည့်ဂိုဏ်းတစ်ခုရှိကြောင်း၊ လွန် ခဲ့သည့် ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်ခန့်က သတင်းများပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။
ကလေးပျောက်မှုများ ပြန် လည် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် နေဒေါ်ထွေးကြည်က ''အရင်တုန်း က ကလေးပျောက်မှုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်တော့ ကျွန်မတို့က ကျောင်းရှေ့ အထိ သွားစောင့်တယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့လဲ ကလေး တွေကို မသိတဲ့သူတွေနဲ့ မလိုက်ဖို့ သတိပေးပြောဆိုတာတွေ ရှိပါ တယ်''ဟုပြောသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွင်းက ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၌ ကလေးပျောက် မှု၊ လူပျောက်မှုပေါင်း ၁၀ဝကျော် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့်ဖြစ် ရပ်များလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ရင်းမြစ်... Yangon Media Group
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, August 16, 2013
မြန်မာမိန်းကလေးများ ရောင်းစားခံနေရသော ဘ၀မှ လွတ်ကင်းကြပါစေ
လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ကိုယ်စီမှာ သွေးစအသီးသီး စွန်းထင်းသွားချိန်တွင် ကျနော့်လက်တွေ တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ခြေရင်းမှာမှီခိုပြီး သင်လာသမျှဘုန်းကြီးကျောင်းပညာသည် သူ့အသက်မသတ်ဖို့၊ အထူးသဖြင့် လူ့အသက်မသတ်ဖို့ကို အတန်တန်ဆုံးမခဲ့သည်။ သို့သော် ကျနော့်ကို ဤဒွန္နယာထဲအရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူမှာ အခြားမဟုတ်၊ ကျနော့်ရဲ့ မခံချင်စိတ်။ ဒီစိတ်ကြောင့်ပင် ကျနော် လူသတ်သမားဘ၀ကို ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူခဲ့မိသည်။ ကျနော်လူသတ်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်။ နှစ်ယောက်တောင်မှ။ မယားကိုလည်းသတ်သည်။ လင်ကိုလည်းသတ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ပါနည်း။ ဒီလင်၊ ဒီမယားအသက်ရှင်နေသေးသမျှ များစွာသောသမီးပျိုတို့၏ ဘ၀ပန်းလေးများ ဆက်လက် ကျေနွမ်းနေကြရပေဦးမည်။ ကျနော် သူတို့လေးတွေ၏ ဘ၀ပန်းများ ဆက်လက်လန်းဆန်းခွင့်ရကြစေဖို့ သွေးစွန်းသော လက်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ကို ခံယူလိုက်သည်။ ကျနော် နောင်တမရပါ။ လုပ်သင့်သည်ကို ကျနော်လုပ်ခဲ့ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ဒီအတွက် သူရဲကောင်းအဖြစ်ကိုလည်းမခံယူလို၊ လူမိုက်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုချင်ဆို။ ကျနော့်အကြောင်းနှင့် ကျနော်ပင်။
ပြောရလျှင် ကျနော့်ဘ၀၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုပင် အပြစ်တင်ရတော့မည်ထင့်။ ကျနော်လူပျင်းတစ်ယောက်မဟုတ်သည်ကို ကျနော့်ရွာတစ်ရွာလုံးသိသည်။ မိသားစုဆင်းရဲပုံကို အကျယ်မချဲ့လိုတော့။ အဖေက ပျံကျအလုပ်သမား။ အမေက ခေါင်းရွက်ဗြတ်ထိုးဈေးသည်။ ဖရဲသီးပေါ်ချိန်ဖရဲသီး၊ ကြံပေါ်ချိန် ကြံ၊ ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း မိသားစုဘ၀လေး ပြိုကွဲမသွားအောင် ရှာကျွေးသည်။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နပ်စာမျှရသောဝင်ငွေသည် မိသားစုတစ်ခုလုံး၏ ၀မ်းဗိုက်ကို ကြာလေကပ်လေ ဖြစ်လာစေသောအခါ ကျနော်မနေနိုင်တော့။ အိမ်ထောင်ပြုလေပြီဖြစ်သော ကျနော့်အမတွေက ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ ယောက္ခအိမ်ပေါ် အခန့်သားတက်နေနိုင်ကြချိန်တွင် လူပျိုလူလွတ်ဖြစ်သော ကျနော့်တစ်ယောက်တည်း မိဘနှစ်ပါး၏ အရိပ်အောက်က မခွါနိုင်သေး။ တစ်သက်လုံး မိဘလုပ်စာကို ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ကပ်စားခဲ့ရသမျှ အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ရှက်တတ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကျန်မိသားစု၏ စားဝတ်နေရေးကို တာဝန်ယူဖို့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် သို့သော်------။
ဆင်းရဲသောနုံချာသော ကျနော့်ဘ၀ကို အဘယ်သူက ကယ်တင်ပါ့မည်နည်း။ ရွာမှာ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း နိုင်ငံခြားပိုးထိုးနေချိန်တွင် ကျနော့်မှာ စိတ်ပင်မကူးရဲသေး။ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ယိုးဒယား ဆိုတဲ့ အသံတွေ နားနှင့်မဆံ့ ကြားနေရပေသည့် ကျနော့်နှင့် လားလားမျှသက်ဆိုင်သည်ဟု မအောင့်မေ့ခဲ့။ ရွာမှာပင် ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း ၀င်ငွေရှာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့နှင့် ထမင်းကျွေးမည့်အလုပ်လိုက်ရှာဖြစ်သည်။ လူဖြစ်လောက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှ ရွာမှာမရှိ။ ရရစားစား ကုန်သွားသည်ချည်းပင်။ တစ်ခါတစ်ရံ အကြွေးပင် တင်လိုက်သေးသည်။ ထိုရောအခါ အကြွေးဆပ်ဖို့ပါ အလုပ်ပိုလုပ်လာရတော့သည်။ သမင်မွေးဘိ၊ ကျားစား၏သို့ ကျနော်လုပ်သမျှ လုပ်အားခသည် အိပ်ကပ်ထဲ ခိုအောင်းနေသည်ဟု တစ်ခါဖူးမျှမရှိခဲ့။ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာဆိုသော ထမင်းသုံးနပ်အတွက် ရှာရသည်မှာ မသက်သာလှ။
အလုပ်ကပြန်လာတိုင်း အမေက ကျနော့်နဖူးပေါ်က ယိုစီးကျနေသောချွေးစလေးများကို ယုယညင်သာစွာသုတ်ပေးရှာသည်။ အမေ့မေတ္တာတစ်ခုတည်းကသာ ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အမောမှန်သမျှကို ပြေပျောက်စေသည်ဟု ခံစားရသည်။ အမေ့ကို သနားသည်။
“အမေ ဈေးထဲထွက်ပြီး ဖရဲသီးမရောင်းပါနဲ့တော့လား၊ ကျနော်လုပ်ကျွေးနိုင်နေပြီပဲဟာ”။ အမေ့ကို မချိတင်ကဲ ပြောဖြစ်သည်။
“အော် သားရယ်၊ ဒီအလုပ်က အမေ့အတွက် မပင်ပန်းပါဘူးကွဲ့၊ ငါ့သားလေး မမွေးခင်ကတည်းက အမေဒီအလုပ်လုပ်ပြီး ရှာကျွေးလာခဲ့တာပဲဟာ၊ သားလည်း သားလုပ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ပါ၊ အမေလည်း အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ကွယ်၊ ဒီအလုပ်က အမေ့တို့ကို ဂုဏ်မငယ်စေပါဘူး သားလေးရယ်၊ ဒီအလုပ်နဲ့ပဲ အမေတို့ မိသားဘ၀လေး ရပ်တည်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား”။ အမေရဲ့ တုန့်ပြန်စကား။
ကျနော့်နှလုံးသားက မခံယူနိုင်သော စကားများပင်။ အမေ့အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော်ပြီ။ အခုထိ မနားရသေး။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ခန့်ကတည်းက လုပ်ခဲ့သောအလုပ်ကို အမေ့ခမျှာ အခုထိ မစွန့်လွှတ်နိုင်သေး။ တခြားလည်း အမေဘာမှ မလုပ်တတ်။
ကျနော်ဒီအတိုင်းနေလို့ မဖြစ်မှန်း တဖြေးဖြေးသိလာသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နားမဆံ့ကြားနေရသည့် စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ယိုးဒယားဆိုသော စကားလုံးများကို သတိပြုမိလာသည်။ “ရွာက ဘယ်သူက ယိုးဒယားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး အိမ်ကို ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပြန်ပို့နိုင်သတဲ့” ဆိုသော သတင်းများကို အားကျလာသည်။ နုံချာလွန်းတဲ့ ကျနော့်မိသားစုနှင့် ကျနော့်ဘ၀၏ ရှေ့ရေးကို တွေးကြည့်လိုက်သောအခါ ထိုသတင်းများသည် ကျနော့်အတွက် အားဆေးသဘွယ်ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု မရဲတရဲချမိသည်။ “ငါ ယိုးဒယား သွားအလုပ်လုပ်မည်” ဟူ၍။ သို့သော် အဘယ်သို့ သွားရမည်နည်း။ နုံချာတဲ့ ကျနော့်ဘ၀မှာ အပေါင်းအသင်းဆိုသူများမှာလည်း ကျနော့်နှင်နှင် ချာတူးလန်များပင်ဖြစ်လေရာ သူတို့ကိုလည်း အားကိုးလို့ မဖြစ်နိုင်။ ထိုရောအခါ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပင် လိုက်စုံစမ်းရတော့သည်။
“မေးပါများ စကားရ” ဆိုသလို ရွာတစ်ပတ်လည် ဟိုမေးသည်မေးလုပ်လိုက်သောအခါ လမ်းစတစ်ခု သွားတွေ့သည်။ ကော့သောင်ကို သွားတဲ့အဖွဲ့နဲ့လိုက်သွားပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ဟိုဘက်ကမ်း ကူးနိုင်သတဲ့။ ဟုတ်ပေပြီ။ ဒီလမ်းကြောင်းသည် ငါ့ဘ၀ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်ချေမည်။ ကျနော် မလိမ်မိုးမလိမ်မာ ဆုံးဖြတ်သည်။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမေ့ကို အရင်တိုင်ပင်သည်။ အမေ့က မသွားစေလို။ သို့သော်လည်း အတန်တန်ပြောဖန်များသောအခါ အမေလည်းမတားနိုင်တော့။ ကျနော့်သဘောဟု အခွင့်ပေးလိုက်သည်။ အမေ့ခါးကြားမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်လိပ်ထားသောဈေးရောင်းရငွေ အနည်းငယ်ကို ကျနော့်လက်ထဲထည့်ပေးသည်။ ကျနော်မယူချင်ပါ။ သို့သော် ငြင်းဆိုဖို့ရန် ခွန်အားလည်း ကျနော့်မှာမရှိ။ ကျနော်သွားမည့်ခရီးက ငွေလိုသည်။ ကျနော့်လက်ထဲ ဘာမှမယ်မယ်ရရ စုဆောင်းထားသည်ဟုမရှိ။ ထို့ကြောင့် အမေ့ချွေးနည်းစာကိုပင် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် လက်ဖျန့်ယူခဲ့ရသည်။
အိမ်အိုပေါ်ရှိ ဘုရားကျောင်းဆောင်အိုလေးထဲတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးတစ်ဆူ သီတင်းသုံးတော်မူသည်။ ကိုးကွယ်သူက ဆင်းရဲရှာသဖြင့် ဘုရားစဉ်သည်လည်း တောက်ပခွင့်မရရှာပေ။
“တပည့်တော် မိဘနှစ်ပါးကို ချမ်းသာစွာထားနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားသွားပြီး အလုပ်လုပ်မှာမို့ တပည့်တော်အား သနားသဖြင့် စောင့်ရှောက်တော်မူပါဘုရား”။ ဘုရားရှေ့ ကျုံ့ကျံ့လေးထိုင်ကာ လေသံတိုးတိုးဖြင့် မရဲတရဲ အသနားခံလိုက်သည်။
ဘုရားကို ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ပြန်အထတွင် အမေနောက်က ရပ်နေသည်။ အမေ့မျက်နှာကို မော်ကြည့်လိုက်မိသည်။ အမေ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတွေ စိုနေသည်။ ကျနော်အမေ့ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ခွဲခွါခြင်းဖြစ်သည်။ အမေ့ကို ကန်တော့လိုက်သည်။
“ငါ့သားလေး သွားလေရာမှာ ဘေးမသီရန်မခပါစေနဲ့ကွယ်”။ အမေဆုပေးသည်။
အဆုံးသတ်စကားလုံးမှာ အမေ့အသံအနည်းငယ် တိတ်ဝင်သွားသည်ကို သတိပြုမိသည်။ ကျနော်ရင်ဘတ် ကွဲအက်သည်သို့ ခံစားရသည်။ သို့သော် ဒီမေ၊ ဒီရေနဲ့ ဒီမြေကို စွန့်ခွါပြီး ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အနာဂတ်ကို ထူထောင်ဖို့ ဒီခရီးကို ကျနော်သွားရတော့မည်။
“သား သွားတော့မယ်နော် အမေ”။ အမေ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
အ၀တ်အစားအနည်းငယ်ထည့်ထားသော အိပ်အဟောင်းလေးကိုလွယ်ပြီး အိမ်ပေါ်ကနှေးကွေးသော ခြေလှမ်းများဖြင့် ကျနော်ဆင်းလာခဲ့သည်။ ကော့သောင်သို့ ထွက်မည့်ကားရှိရာသို့ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်သွားသည်။ ကျနော့်ကျောပြင်ကို အမေကြည့်နေမည်မှာသေချာသည်။ ကျနော်နောက်ပြန်မလှည့်ဖြစ်အောင် အားတင်းပြီး ဆက်သွားခဲ့ရသည်။ ဤသည်ပင် ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ ခရီးအစ မဟုတ်ပါလော။
ကားပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်သောအခါ ကျနော့်နည်းတူ ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီဖြင့် ဘ၀ကြမ်းကို ဖြတ်သန်းမည့်သူများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအထဲတွင် မိန်းကလေးများလည်းပါသည်။ ဘာသွားလုပ်ကြမည်နည်း၊ ကျနော် မသိ။ မေးလည်း မမေးမိ။ ကျနော့်ရွာသားများကိုလည်းတွေ့ရသလို အခြားရွာမှလာသော မိန်းကလေးများကိုလည်းတွေ့ရသည်။ အားလုံးစွန့်စားကြမည့် မျက်နှာကိုယ်စီရှိကြသည်ချည်း။ ကျနော် အားတက်လာသည်။ လူစုံသလောက်ရှိသောအခါ ကားစက်စနှိုးသည်။ ကားထွက်ခါနီးမှ အပြေးအလွှားရောက်လာသူများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ကားတစ်စီးလုံးပြည့်ညပ်သွားသည်။
ကားဘီးစလိမ့်ချိန်တွင် အမေ့ကို စိတ်ထဲက မှန်းပြီး ဦးချလိုက်သည်။ “နေရစ်ပေဦးတော့ အမေရယ်”။စိတ်ထဲက ရေရွတ်ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်ပါလာသူများအားလုံး ပျော်ရွှင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျနော့်တစ်ယောက်တည်းကသာ ကျန်ရစ်သောအမေအိုကို စိတ်မချနိုင်ဖြစ်ပြီး တွေဝေနေသည်။ လမ်းတစ်လျှောက် လှပလွန်းသော ရှုမျှော်ခင်းများကိုလည်း အာရုံမ၀င်စားနိုင်ခဲ့။ ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးကို မည့်သို့ရှိလေမည်နည်း၊ ကျနော် တွေးကြည့်နေမိသည်။ မျက်လုံးများ တဖြေးဖြေး မှေးစင်းလာသည်။ ဘေးက ဟေးလားဝါးလား ရယ်သံမောသံများလည်း နားထဲမ၀င်လာတော့။
“အမေရေ့----အမေ၊ သားပြန်လာပြီ၊ အမေ့အတွက် သား ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှာလာခဲ့တယ်သိလား။ အမေ အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးရောင်းစရာမလိုတော့ဘူး သိလား၊ သားရှာလာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အိမ်မှာပဲ ကုန်စုံဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်မယ်နော်၊ အမေ အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးရောင်းစရာ မလိုတော့ဘူးနော်၊ အေးအေးဆေးဆေး အိမ်မှာနေပြီး အရိပ်ထဲ ဈေးရောင်းလို့ရပြီ၊ သိလား အမေ”။ ရောက်ရောက်ချင်း ကျနော်မနားတမ်း အားရ၀မ်းသာ ပြောလိုက်သည်။ ကျနော့်ကို မြင်တော့ တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေသည်။ ကျနော့်ဦးခေါင်းကို ဖက်ထားပြီး “ငါ့သားလေး ဘေးမသီရန်မခ ပြန်ရောက်လာတာကိုပဲ အမေ၀မ်းသာလှပါပြီကွယ်”။ အမေစကားဆိုသည်။ ၀မ်းသာလွန်းသော အမေ့မျက်ဝန်းတစ်စုံက ကျနော့်ကို နွေးထွေးစေသည်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်နီးချင်းများလည်း ကျနော်ပြန်ရောက်ကြောင်း ကြားသဖြင့် လာမေးကြသည်။ အမေ့ရဲ့ အိမ်အိုလေး ကျနော်ပြန်ရောက်တဲ့မှာ ပြန်လည်စိုပြေလာသည် ဟုခံစားလိုက်ရသည်။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် မေးခွန်းများကို ကျနော်ဖြေနေရသည်။ အားလုံးပျော်နေကြသည်။
ဆူဆူညံညံအသံဗလံများကြောင့် လန့်နိုးလာသည်။ “အော်---ငါအိမ်မက် မက်နေတာပါလား”။ အိမ်မက်လေးကို ပြန်တမ်းတနေမိသည်။ အိမ်မှုံစုတ်ဖွါးဖြင့် အပြင်ဘက်ကြည့်လိုက်သည်။ ကော့သောင်သို့ပင် ရောက်နေချေပြီကော။ ကားဂိတ်တွင် အသားဖြူဖြူနှင့် မွန်လူမျိုးဖြစ်ဟန်တူသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လာကြိုနေသည်။ သူနှင့်အတူ ရနောင်းကမ်းဘက် လိုက်မည့်သူများကို စာရင်းယူသည်။ ကျနော်လည်း စာရင်းပေးလိုက်သည်။ မိန်းကလေးအများစုဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျနော်တို့အုပ်စု အားလုံးဆယ်ရောက်ခန့်ရှိမည် ထင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါသွားကြသည်။ အိမ်ကြီးတစ်လုံးပေါ်သို့ ရောက်ကြသည်။ ကျနော်တို့အုပ်စုကို မိန်းမ၊ ယောက်ျားခွဲခြားထားသည်။ နှစ်အုပ်စုဖြစ်သွားသည်။ သွားရမည့်ခရီးစဉ်ကို ပြောပြသည်။ ဟိုဘက်ကမ်းရောက်က မည်သို့မည်ပုံနေထိုင်ရမည်ကိုလည်း ပြောပြသည်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများကို သီးသန့်ခေါ်တွေ့သည်။ ဘာတွေပြောသလဲ ကျနော်မမေးမိ။ ကျနော်နှင့် မဆိုင်ဟု တွက်ထားခဲ့သည်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်မဟုတ်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်က ဟိုဘက်ကမ်း ရောက်လျှင် အလုပ်ကောင်းကောင်းရှာမည်၊ ငွေစုမည်၊ ရသမျှ အမေ့ဆီ ပြန်ပို့မည်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်က ဤမျှသာ။
ဟိုဘက် ရနောင်းကမ်းသွားမည့် မော်တော်တစ်စီးပေါ်သို့ တက်ကြရသည်။ မိန်းမကြီးလည်းပါသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးကို လှေဝမ်းဗိုက်ထဲသို့ ၀င်စေပြီး အပေါ်က တာလပတ်များဖြင့် အုပ်လိုက်သည်။ လှေဝမ်းထဲ ဘာမှမမြင်ရ။ မှောင်မည်းနေသည်။ မိန်းမယောက်ျားမကွဲတော့။ အတူတူပူးကပ်နေကြရသည်။ ဤလှေဝမ်းမှာ ငါးထည့်သော နေရာဖြစ်သည်။ ကော့သောင်ကမ်းမှ ဖမ်းရသမျှ ငါးများကို ဤလှေဝမ်းဗိုက်အတွင်းထည့်ပြီး တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ပို့ရသည်။ အခုတော့ ငါးနေရာတွင် မနုဿလူသားများ အစားဝင်ယူနေရသည်။ ငါးပုတ်အနံ့ဖြင့် လှေဝမ်းတစ်ခုလုံး နံစော်နေသည်။ အထဲရောက်ရောက်ချင်း အော့အံချင်စိတ်ပင် ပေါက်သွားသည်။ သို့သော် ကျနော်ရွေးချယ်ခဲ့သော လမ်းပင် မဟုတ်ပါလား။ သည်းခံရပေဦးတော့မည်။ ဒုက္ခ၏ ဦးစွာနှုတ်ဆက်သံကို ကျနော်မနာခံလို့ မဖြစ်။ ရှေ့ဆက် ဒိထက်ဆိုးမည်ကို တွေးမိလိုက်သည်။
လှေစထွက်သောအခါ မော်တော်စက်သံကြောင့် နားကွဲမတတ်အူသည်။ အချို့မိန်းလေးများ လှိုင်းမူးသဖြင့် အော့အံနေကြသည်။ လေကောင်းလေသန့်ရှူရှိုက်ခွင့်မရ။ လှေဝမ်းဗိုက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ
တွင် ငါးပိသိပ်ငါးချဉ်သိပ် လိုက်ပါခဲ့ရသည်။ တာမောစခန်းခေါ် ကြားခံစစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ ရောက်သောအခါ ကျနော်တို့ကို ခေါ်လာသောမွန်မကြီးက သက်ဆိုင်ရာကို ဘာတွေသွားပြောနေသည်မသိ။ သက်ဆိုင်ရာက လှေပေါ်ဆင်းလာပြီး စစ်ဆေးခြင်းမပြု။ အပေးအယူတစ်ခုခုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျနော်တွေးမိသည်။ ခဏနေသောအခါ မော်တော်ပြန်ထွက်လာသည်။ ရနောင်းကမ်းဘက်သို့ တဖြေးဖြေးဆိုက်ကပ်နေကြောင်း သိရသည်။
တစ်ဘက်ကမ်းသို့ မော်တော်ဆိုက်ကပ်လေပြီ။ ကမ်းနဖူးတွင် မွန်အမျိုးသားတစ်ယောက် ရပ်စောင့်နေသည်။ ဟိုအမျိုးသမီး၏ ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်း နောက်မှသိရသည်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကို သူတို့နေထိုင်ရာ အိမ်ကြီးသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အိမ်ကြီးဆိုသော်လည်း သူတို့ပိုင်သည်တော့ ဖြစ်ဟန်မတူ။ အငှါးအိမ်ဖြစ်ပုံရသည်။ အိမ်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါ မွန်လင်မယားက ဇာတိစပြသည်။ ကျနော်တို့ယောက်ျားလေးများကို စပ်ဆိုင်ရာမှာ အလုပ်သွင်းပေးမည်၊ လုပ်အားခ သုံးပုံတစ်ပုံကို ပေးရမည်ဟုဆိုသည်။ ဘာမှမတတ်နိုင်၊ သူ့လက်ခုပ်ထဲကရေဘ၀ရောက်သွားလေပြီမို့ သွန်လိုသွန် မှောက်လိုမှောက်ချေတော့။ ပြုသမျှ နုရတော့မည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် မနီးမဝေးရှိ ငါးအလုပ်ရုံတစ်ခုတွင် အလုပ်ရသည်။ မြန်မာအလုပ်သမား အများစုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုင်းအလုပ်သမားအနည်းငယ်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မိန်းကလေးများကိုမူ မည်သည့်အလုပ်ပေးသည်ဟု မသိရသေး။
ငါးအလုပ်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း အပေါင်းအသင်းရလာသည်။ အလုပ်သမားအများစုမှာ စုဖို့ဆောင်းဖို့ သတိမရကြ။ ရလာသမျှ လုပ်အားခကို သုံးပစ်ဖြုန်းပစ်သည်ချည်း။ ကျနော့်မှာ အလွန်ခင်စရာကောင်းသော ထိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရသည်။ အစစအရာရာကူညီသည်။ စိတ်သဘောကောင်းသည်။ သို့သော် ကျနော့်ခမျှာ ပျော်ရွှင်ခွင့်မရ။ တပင်တပန်းလုပ်ပြီး ရလာသောလုပ်အားခ သုံးပုံတစ်ပုံကို မွန်လင်မယားလက်ထဲ ထည့်ထည့်ပေးနေရသည်။ မပေးလျှင် ထိုင်းရဲလက်ထဲအပ်မည်ဟု ချိန်းခြောက်သည်မှာလည်း အခါခါ။ ထောင်ထဲနေပြီး ဘ၀သေနေသည်နှင့်စာလျှင် အပြင်မှာ ရှင်သန်ခွင့်ရသည်ကို အမြတ်ဟု ယူဆကာ ဖြစ်သမျှကို ကျိတ်မှိတ်ခံရင်း ကျနော်နေခဲ့ရသည်။
ရက်အတန်ကြာသောအခါ သတင်းတစ်ခု ကြားရသည်။ ကျနော်နှင့်အတူပါလာသော မိန်းကလေးများကို ဇိမ်ခန်းပို့မည် တဲ့။ ယင်းအတောအတွင်း ကျနော်တို့အဖွဲ့ထဲက ရုပ်သန့်သန့်မိန်းကလေးသုံးယောက်ကိုလည်း ထိုင်းရဲလက်သို့အပ်ကာ ပျော်ပါးစေသည်ဟုကြားရသည်။ ဤသို့သော နည်းလမ်းဖြင့် လူကုန်ကူးသော မွန်လင်မယားတို့သည် ထိုင်းရဲနှင့် အပေးအယူမျှလျှက်ရှိကြောင်းလည်း ကြားသိလိုက်ရသည်။ မြန်မာမိန်းကလေးများအတွက် ကျနော့်ရင်တွေ နာကျင်လာသည်။ နှမချင်းစာနာစိတ်က ကျနော့်ကို သွေးအေးခွင့်မပြုတော့။ ကျနော့်သွေးတွေ ဆူဝေလာသည်။ မွန်လင်မယားကို ဆုံးမချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ အနိုင်ကျင့်လွန်းသည်ဟု ခံစားရသည်။ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း လုပ်ရက်ပလေတယ် ဆိုသည့်အတွေးက ကျနော့်ဦးဏှောက်ကို အဆင်အခြင်မဲ့သွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်းသူငယ်ချင်းကို အကူအညီတောင်းရသည်။ သေနတ်တစ်လက်ရှာပေးဖို့။
လျောလျောလျှူလျှူပင် ကူညီသည်။ ပစ်နည်းခတ်နည်းကိုပါ ကျကျနနသင်ပေးသည်။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောသည်။ တစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါ ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ လုပ်ရတော့သည်။ သေနတ်နှင့်လက်ကို ရင်းနှီးအောင် မကြာခဏလေ့ကျင့်ရသည်။ လွဲချော်၍မဖြစ်။ သူ့အသက်မပါလျှင် ကိုယ့်အသက်ပေးလိုက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျည်ဆံတစ်တောင့်မှာ အသက်တစ်ချောင်းပါရမည်။ အချိန်၊ နေရာ၊ ကွက်တိဖြစ်အောင် စဉ်းစားစီစဉ်ရသည်။ တစ်ခါဖူးမျှ လုပ်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသော စွန့်စားမှုမျိုးကို ကျနော်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလေရာ တွေးမိတိုင်း ကြက်သီးမွှေးညင်းများပင် ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည်အထိ ကျောစိမ့်မိသည်။ ကြောက်သည်လော၊ လန့်သည်လော ဝေခွဲမရသော ခံစားချက်မျိုးလည်း ခဏခဏပေါ်ပေါ်လာတတ်သည်။
ညသည် လရောင်မှုံပြပြအလင်းရောင်အောက်တွင် အိပ်မောကျနေသည်။ ခပ်ဝေးဝေးမှ ခွေးအူသံသဲ့သဲ့ကြားရသည်။ ကျနော်စတည်းချရာ တဲစုတ်လေးထဲမှ အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်သည်။ ခါတိုင်းထက် ပိုမိုတိတ်ဆိတ်နေသယောင်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပုရစ်အော်သံဖြင့် စည်ဝေနေသည်။ လူသံသူသံကား ဘာမှမကြားရ။ တစ်နေ့တာ အလုပ်ပင်ပန်းလွန်းသဖြင့် ၀န်းကျင်ရှိလူသားအားလုံး အိမ်မောကျနေချိန်ဖြစ်သည်။ မွန်လင်မယားလည်း အခုလောက်ဆို သျှူးနေလောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတွက်ဆမိသည်။ ဒီလောက်တောင် လူစိတ်ကင်းမဲ့လွန်းသောလူများ ဒီဘ၀မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မပေးသင့်ကြောင့် ကျနော့်ဘ၀အသိက နိုးဆော်နေသည်။ ကိုယ့်လုပ်အားခကို ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ မြန်မာအချင်းချင်း ရောင်းစားမှုဆိုသော ပုဒ်မများဖြင့် ကျနော် ဖြေရှင်းရတော့မည်။ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို လက်ဖြင့်ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်လိုက်သည်။ ကျည်ဆန်ခြောက်တောင့် ပြည့်မပြည့်ပြန်စစ်လိုက်သည်။ သေချာပြီဆိုသောအခါ မွန်လင်မယားနှစ်ယောက် အိပ်မောကျရာ အိမ်ကြီးဆီ အသာချဉ်းကပ်သွားသည်။
ရင်ဘတ်ထဲ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ သည်နေ့မှ သေနတ်ကလည်း ခါတိုင်းထက် ပိုလေးနေသလို ခံစားရသည်။ လက်ဖြင့် မကြာခဏ ဆဆပြီး ကိုင်ကြည့်သည်။ ချိန်ကြည့်သည်။ မောင်းဖြုတ်လုလု စမ်းကြည့်သည်။ အိုကေ။ အိမ်ထဲဝင်ပြီး မွန်လင်မယားနှစ်ယောက်တို့စံမြန်းရာ အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်လိုက်ရာ ကံအားလျော်စွာ အတွင်းက ဂျက်ထိုးမထား။ သို့သော် တံခါးဖွင့်သံကြောင့် လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနိုးသွားသည်။ ကျနော့်လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသော သေနတ်ကို တွေ့သောအခါ ပြူးကျယ်သော၊ အသနားခံသော မျက်လုံးလေးလုံး ကျနော့်ကို စုပြုံကြည့်နေကြသည်။ စဉ်းစားချိန်များများ ပေး၍မဖြစ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်လိုက်သည်။ ယောက်ျား၏ ရင်ဝသို့ ချိန်ကာ ကျည်တစ်တောင့် ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ ထထိုင်နေတဲ့ သူ့၏ ကိုယ်လုံးမှာ ကျည်တွန်းအားကြောင့် အိပ်ခန်းနံရံသို့ ကပ်သွားသည်။ ထို့နောက် သူ့မယား၏ ရင်ဘတ်သို့ နောက်ကျည်တစ်တောင့် ထည့်ပေးလိုက်သည်။ လွဲစရာအကြောင်းမရှိ။ လေ့ကျင့်ထားသော လက်ဖြင့် အနီးကပ်ဖြုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ပွဲချင်းပီး လျောသွားသည်။ အနားမှာ အိပ်ပျော်နေသော ငါးနှစ်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက် အိမ်ယာမှ လန့်နိုးလာသည်။ သေနတ်ပြောင်းကို ကလေးဆီ ဦးတည်လိုက်သည်။ သို့သော် “သူ့မှာ အပြစ်မရှိ”ဆိုသောအသိက ကျနော့်ကို တားဆီးလိုက်နိုင်သည်။ နေပစေတော့။ သူ့ကံနဲ့သူ ရှိပစေတော့။ ဒီမိသားမှာမှ ညီးကလေးလာပြီး လူဖြစ်ရှာပေသကိုး။ ကျနော် ထားခဲ့သည်။ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာသည်။
သူ့နာမည်က “မြတ်မြတ်”။ အသားဖြူဖြူ၊ နှာတံပေါ်ပေါ်၊ သမင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်လေး တစ်ယောက်။ ကျနော်တို့အုပ်စုထဲမှာ ရုပ်အချောဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်သည်။ အပြောအဆို သွက်လက်ချက်ချာပြီး လူရည်လည်ဟန်လည်းတူသည်။ မွန်လင်မယားနှစ်ယောက်၏ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်ရဲတွေကို မျက်နှာလို မျက်နှာရ လာဒ်ထိုးမှုတွင် သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူလေး။ ထိုင်းရဲများ၏ အသုံးတော်ခံတဖြစ်လဲ အများနည်းတူ မကြာမီ ဇိမ်ခန်းသို့ အပို့ခံရတော့မည့်ဆဲဆဲ။ ကျနော် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ့တစ်ယောက်တည်းကို မဟုတ်။ အခြားမိန်းကလေးများကိုလည်း ကျနော် ကယ်တင်လိုက်နိုင်သည်။ အပင်ပေါ်က ကြွေကျလို့ မြေသို့ခရရှာလင့်ကစား နင်းခြေခံဘ၀မျိုးသို့ မရောက်သေးသည့်အတွက် ပန်ဆင်လိုသူအဖို့ တော်ဝင်ထိုက်နေဆဲ။ အဖတ်ဆည်နိုင်သေးတဲ့ဘ၀နဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်သေးတဲ့အတွက် ကျနော်သည် သူတို့လေးတွေ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကိုသက်ရယ်၊ ဒီတစ်သက်တော့ ကျမတို့ဘ၀က ကိုသက်ပေးတဲ့ အရှက်နဲ့ပဲ ဆက်ပြီး ရှင်သန်ကြရတော့မှာပါ၊ ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးရှင်”။ မြတ်မြတ်က ဆိုလာသည်။
“မင်းတို့ဘာသာ ရှေ့ဆက်ပြီး ကြည့်လုပ်ကြပေတော့၊ ငါကတော့ ဒီမှာနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး”။ ဗလုံးဗထွေးပြောလိုက်မိသည်ထင့်။ ကျနော့်မှာ စကားများများပြောဖို့ အချိန်မရှိ။ ပြေးရပေဦးမည်။ အားပေးစကားအနည်းငယ်ပြောပြီး အသင့်စောင့်နေသော သူငယ်ချင်းလက်ထဲ သူ့သေနတ်ပြန်အပ်ကာ မိုးမလင်းခင် ရနောင်းကမ်းက လစ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကံအားလျော်စွာ ကော့သောင်သို့ ထွက်မည့် မော်တော်တစ်စီးနှင့်တွေ့သဖြင့် တက်လိုက်လာခဲ့သည်။
အကျည်းတန်သော၊ ယုတ်မာသော၊ ကိုယ်ချင်းမစာသော၊ ကိုယ့်အမျိုးကို တိုင်းတစ်ပါးသို့ပြန်ရောင်းစားသော မွန်လင်မယားကို ကလဲ့စားချေခွင့်ရခဲ့သော ကျနော့်နှလုံးသားသည် အပြန်လမ်းတွင် ပေါ့ပါးနေသယောင်။ ကျနော့်အိပ်ကပ်ထဲတွင်ကား သုံးစရာငွေတစ်ပြားသားမှ မရှိ။ အမေ့ကို ဘယ်သို့ပြောရမည်နည်း။ ကိစ္စမရှိ။ အမေသည် သားပြောသမျှ ယုံသည်ချည်း။ အမေစိတ်မဆင်းရဲအောင် ညာရဦးတော့မည်။
“ချစ်စွာသောအမေနဲ့ အေးအတူ၊ ပူအမျှ နေထိုင်ဖို့ သားပြန်လာပါပြီအမေ”၊ ကျနော့်ရင်ထဲက တိတ်ဆိတ်စွာ ဆိုဖြင့်သောစကား။ စထွက်လာစဉ်က ကားပေါ်တွင် မက်ခဲ့ရသော အိမ်မက်လှလှလေးကို ပြန်လည် သတိရနေမိသည်။
“အော် အိမ်မက်တွေသာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်-------------”။
မြန်မာမိန်းကလေးများ ရောင်းစားခံရသော ဘ၀မှ လွတ်ကင်းကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှက်--------------။
မှတ်ချက်။ ကြေကွဲစရာကောင်းလှသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်ရှည်မည်စိုးသောကြောင့် အကျဉ်းချုပ်ရေးထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်မှ ယူထားပါသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်း လေးကို ပြန်လည်ရေးသား ပေးပို့ ပေးသော ကိုမင်းထက် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, August 12, 2013
ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ လေဆန်လမ်းရဲ.စည်းဝါးခတ်သံ ဆိုတဲ့ ပြဇာတ် ကို ရှစ်လေးလုံးငွေရတု အခမ်းအနား
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, August 10, 2013
ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မလမ်း MCCခန်းမမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ (၂၅)နှစ်ပြည့် ငွေရတုအခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြား
ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသွားခဲ့သော မင်းကိုနိုင်၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့ ...
'ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းရဲ့သဘောကို ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ ကာလတစ်ခုတော့ အင်အားရှိတဲ့သူတွေဟာ သမိုင်းကိုလိုသလို ဆိုင်းဘုတ်တင်လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးလို့ရပါလိ့မ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းဟာ ရှည်ကြာစွာတော့ ရုပ်ဖျက်ခံထားလို့မရပါဘူး။အချိန်တန်ရင် အမှန်တရားဟာအောင်ပွဲခံရမယ်ဆိုတာ ဒီကနေ့.....အခုလို ခမ်းမထဲလျှံကျသွားအောင် အပြင်မှာဆိုရင်လည်း နောက်ထပ် ဒီ့ထက်မက အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြတဲ့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ရဲရင့်မှု တက်ကြွမှုနဲ့ ကျနော်တို့ အရေးတော်ပုံကြီးကို တန်ဖိုးဘယ်လောက်ထားတယ်၊ ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အင်အားကိုတွေ့ရင် သိသာနေပါပြီလို့ ပြောလိုပါတယ်။'
'ကျွန်တော်တို့ အဓိကကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေဟာ မိဘပြည်သူတွေပါ ဒီအရေးတော်ပုံကို ကျောင်းသားတွေစခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် မိဘပြည်သူတွေမပါရင် အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းအချိုးအကွေ့ကြီးတစ်ခုကို ဘယ်လိုမှဖန်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရှေ့က လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ နောင်တော် အစ်မတော်မျိုးဆက်များအားလုံး ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့တလေးတစားမှတ်တမ်းတင်ပါတယ် ... သူတို့ခေတ် သူတို့အခါ ထောင်ကျခံ အနှိပ်စက်ခံ နောက်ဆုံး အသက်တွေ ဆုံးရတဲ့အထိ သူတို့ ယုံယုံကြည်ကြည် ကိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါင်းအလံကို သူတို့ခေတ် တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့အလျှောက် ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်တဲ့အခါ လက်ကမ်းပေးခဲ့တာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ခင်းခဲ့တဲ့ လမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ခဲ့ရတာပါ။ '
'ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ ဘယ်တော့မှ အချိုးအကွေ့တွေကို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီ့ ရှစ်လေးလုံးမစခင်မှာကတည်းက ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ မိဘပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကောင်းစွာ ပြန်မြင်ယောင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နံပါတ်တစ် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရအားပေးခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှဘဝကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းတာခံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ချိမ်းခြောက်မှုတွေကြားထဲကပဲ ကျောင်းသားတွေကို အကူအညီပေးခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့တွေ ကြေညာစာတမ်းတွေရေးဖို့ ကြွေးကြော်သံပိုစတာတွေကပ်ဖို့ သိပ်ဆင်းရဲနေတဲ့ ခေတ်မှာ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပြက္ခဒိန်အဟောင်းလေးတွေကို ဖြုတ်ပြီးတော့ ရေးကြကွာ ကပ်ကြကွာ ဆိုပြီးကူညီခဲ့တဲ့ မိဘပြည်သူတွေဟာ အင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေလမ်းတွေပေါ်ဆန္ဒပြချီတက်ကြ ဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့အခါမှာ အိမ်မှာရှိတဲ့ ထမင်းကြမ်းခဲလေးတစ်ခဲ၊ ငှက်ပျောသီးလေးတစ်ဖီးကျွေးခဲ့တဲ့ မိဘပြည်သူတွေကိုလည်း ဒီကနေ့ အဲဒီ့ကျေးဇူးတွေ သတိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အန္တရာယ်တွေကြားမှာ ပြေလွှားပြီးတော့ ပုန်းအောင်းတဲ့အခါမှာ အားလုံးသော ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ့်သားသမီးတွေလို အိမ်မှာ ဖွက်ပေးခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ရင်းပြီးတော့ အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ တကယ့်ကို ကြက်သားအုပ်မကြီးက ကြက်သားကလေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ဒီအချိန် အသက်ရှင်တဲ့သူတွေ ဆက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင်တာဟာ ရှစ်လေးလုံးကြီးကိုလည်း ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တာ နောက်ဆုံး ကျောင်းသားတွေ အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် အန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့ကြားက ကိုယ့်အိမ်တွေမှာ နေရာပေး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကင်းစောင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဒီကနေ့ အမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။'
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကလေးပျောက်ဆုံးမှုများ ပြန်...